Abavelisi benkqubo yeWDM | KwiChina i-WDM System Factory kunye nabaXhasi
I-100G OTN Transmitter ixhasa uqhagamshelo lwabaxhasi be-QSFP28 kunye nomnxibelelanisi wecala elinye leCFF ukuxhasa isiteshi esinye se-100Gbps sokudluliswa kwedatha enkulu. Itekhnoloji ehambelanayo kakhulu kumzi-mveliso kunye ne-FEC yokuqhubela phambili kwimpazamo yokulungisa iteknoloji yokwenza amandla okuhambisa, ukuhambisa ukusebenza okuphezulu.
I-200G Muxponder 2x100G iguqukela kwi-200G
SFP + Multi-Rate Quad Transponder 10Gbps Isiguquli / Isiguquli / iTransponder
I-SFP + ye-Quad Transponder ine-8 SFP + slots, Esi sixhobo sinika ukuhanjiswa okuguqukayo kweenkqubo ezahlukeneyo, ezinje nge-1G / 10G Ethernet, i-SDH STM16 / STM64, OTU1 / OTU1e / OTU2 / OTU2e, Ifayibha Channel 1/2/4/8 / 10, CPRI, njl njl. Uluhlu olubanzi lwezisombululo zezixhobo ezibonakalayo zibandakanya ukuguqulwa kwemithombo yeendaba, ukuphinda umqondiso, ukuguqulwa kwe-lambda.
I-40G kunye ne-100G yokuThengisa
I-40G kunye ne-100G Muxponer ixhasa i-4x10G↔40G okanye i-4x25G↔100G yombane we-multiplexing / demultiplexing, kwaye iguqula imiqondiso yokukhanya ye-multiplexed / demultiplexed ibe yi-DWDM standard wavelength signal. I-DWDM MUX / DEMUX, iinkonzo ezininzi ze-100G okanye i-40G iinkonzo zihanjiswa kwinkqubo ye-DWDM. I-40G kunye ne-100G Muxponder sisisombululo esinexabiso eliphantsi kuthumelo lwenethiwekhi ye-DWDM yenethiwekhi ye-100G.
40G kunye ne-100G OEO Converter
I-40G kunye ne-100G Transponder ixhasa ukufikelela kwi-40G okanye kwi-100G. Uluhlu olubanzi lwezisombululo zezixhobo ezibonakalayo zibandakanya ukuguqulwa kwemithombo yeendaba, ukuphinda umqondiso, ukuguqulwa kwe-lambda.
I-SFP28 Multi-Rate Quad Transponder ine-8 SFP28 slots, Esi sixhobo sinika ukuhanjiswa okuguqukayo kweeprotokholi ezahlukeneyo, ezinje nge-100M / 1G / 10G / 25G Ethernet, SDH STM1 / STM4 / STM16 / STM64, Fibre Channel 1/2/4/8 / 10/16 / 32Gbps, i-CPRI, njl.
I-SFP28 transponder ixhasa ukusebenza kwamanqanaba ngamanqanaba wedatha ebonakalayo ukusuka kwi-1Gbps ukuya kuthi ga kwi-32Gbps; Uluhlu olubanzi lwezisombululo zezixhobo ezibonakalayo kubandakanya ukuguqulwa kwemithombo yeendaba, ukuphinda umqondiso, ukuguqulwa kwe-lambda.
Ukuphinda usebenzise amaXabiso amaBini oPhindaphindo oluPhindiweyo lwe-10 Gbps / Isiguquli / iTransponder
Le transponder sisixhobo se-10G sefayibha kwifayibha 3R ephindayo kunye nesiguquli. Le Transponder ixhasa i-SFP + kwi-SFP + okanye i-XFP kunxibelelwano lwefayibha ye-XFP. 1 + 1 Zenzekelayo ilayini enombala woKhuselo lokuTshintsha kuxhaswa kumazibuko emigca. I-Transponder yiprothokholi esekuhleni, ebonelela nge-3R (Ukuphinda-kwandiswe kwakhona, ukuBumba kwakhona kunye nokuBuyisa kwakhona) phakathi kwezi ntlobo zeemodyuli ezibonakalayo.
Blue / Red EDFA Optical ngombhobho
Iimodeli zeFree Bidirectional ze-EDFA zesikhulisi esisodwa zibandakanya iRed kunye nezibuko eliluhlaza elilungiselelwe isisombululo esinye se-DWDM. Uyilo lwezi modeli lusetyenziselwa inkqubo yokuhambisa enye ye-DWDM.
Ukufikelela kwinqanaba le-EDFA Optical Amplifier-PA Card
Ngokusetyenziswa kweenkqubo zemigama emide kuya kusiba ngakumbi nangakumbi, ukufikelela kwinqanaba eliphakathi lenkampani yethu (i-MSA) i-EDFA, ukufikelela kwinqanaba eliphakathi (i-MSA) i-EDFA inokuyicombulula ngokufanelekileyo ilahleko yokufaka ebangelwe yiDCM kunye ne-OADM, isusa iDCM kunye Iibhanti ze-OADM. Isiphumo sokulahleka kokufakwa kunciphisa ukuthotywa okongeziweyo kwenkqubo ye-OSNR.
Isikhulisi se-EDFA Optical-Isikhulisi sokuNyusa
EDFA Omfanekiso Amplifier mi-odule ibonelela ngemisebenzi emininzi, ingxolo ephantsi, izisombululo ze-Erbium-Doped Fibre Amplifier (EDFA), Imodyuli yesikhulisi inokuqhutywa ngokufumana rhoqo (Ukuzuza okuzenzekelayo kuLawulo lwe-AGC), amandla emveliso rhoqo (yoLawulo loMbane oZenzekelayo, i-APC). I-VOA edityanisiweyo inokuhlengahlengiswa ngokuzenzekelayo ukuze kufezekiswe ukubonwa okuhle. Inokonyusa umqondiso weC-Band kunye okanye w / o ukufikelela kwinqanaba eliphakathi (MSA), elizisa ubhetyebhetye obukhulu kwisicelo senethiwekhi.
Ukusasazwa kwesixhobo seMbuyekezo seDCM
Umsebenzi we-Huanet wokuhlawulwa kwembuyekezo ngembuyekezo yokusasaza imo yefayibha yendlela enye i-DCM (G.652) yayiyintsali kunye nokusasazeka kwethambeka lokuhlawulwa kwebhendi ebanzi kwi-C-band, ivumela inkqubo ukuba ikwenze ukusasazeka okushiyekileyo. Kwixabiso lokusasazwa kwexabiso le-1545nm ukusasazeka kwe-wavelength kunokufikelela -2070ps / nm.
Iimodyuli zembuyekezo yokuSasazeka zakha iibhloko ze-HUA6000 Optical Transport System kwaye zisebenza kwiindawo zonxibelelwano ezibonakalayo ukulungisa imeko yokusasazeka kwe-pulse eyaziwa ngokuba yiChromatic Dispersion enciphisa umgama wokudluliselwa kwedatha kwimisonto ebonakalayo.
I-Sfp C ++, Imodyuli yeFiber Optical, Ixabiso leHuawei Olt, IHuawei Qsfp +, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Umthumeli weXfp,